တရုတ်ဆိုဒီယမ် Perchlorate စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ YANXA
CAS အမှတ် .:
RTECS အမှတ် .:
ဆိုဒီယမ် perchlorate သည် NaClO ဓာတုဗေဒဖြင့်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲဖြစ်ပြီး hygroscopic solid ဖြစ်ပြီးရေနှင့်အရက်အလွန်တွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုများသောအားဖြင့် monohydrate အဖြစ်တွေ့ရသည်။
ဆိုဒီယမ် perchlorate သည်အစွမ်းထက်သောဓါတ်တိုးနိုင်သော်လည်း၎င်းကို pyrotechnics အတွက်ပိုတက်ဆီယမ်ဆားကဲ့သို့အသုံးမဝင်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ hygroscopicity ။ ၎င်းသည် Perchloric acid ကိုဖြစ်ပေါ်စေရန် sulfuric acid ကဲ့သို့သောအားကြီးသော mineral acid နှင့်ဓာတ်ပြုလိမ့်မည်။
အသုံးပြုမှု: အဓိကအားဖြင့်နှစ်ချက်ပြိုကွဲခြင်းဖြစ်စဉ်မှတစ်ဆင့်အခြား Perchlorate ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။
1) ဆိုဒီယမ် perchlorate, anhydrous
2) ဆိုဒီယမ် perchlorate, monohydrate
ဆိုဒီယမ် perchlorate သည်အစွမ်းထက်သောဓာတ်တိုးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများနှင့်ခိုင်ခံ့သောဓာတ်ပြုပစ္စည်းများနှင့်ဝေးဝေးနေသင့်သည်။ ကလိုရိုက်နှင့်မတူဘဲဆာလ်ဖာနှင့် Perchlorate ရောနှောခြင်းသည်အတော်လေးတည်ငြိမ်သည်။
NaClO4 ကိုအနည်းငယ်တင်းသောပိတ်ဆို့ထားသည့်ပုလင်းထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောအက်ဆစ်ဓာတ်ငွေ့များမှကင်းဝေးသင့်ပြီး anhidrous perchloric acid၊ မီးနှင့်ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်များကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလောင်ကျွမ်းနိုင်သောမည်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်မဆိုဝေးဝေးထားရမည်။
ဆိုဒီယမ် perchlorate ကိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်သို့စွန့်ပစ်ခြင်းမပြုသင့်ပါ။ ၎င်းကို NaCl သို့လျှော့ချသောအေးဂျင့်နှင့်အတူပထမဆုံးဖယ်ထုတ်ရမည်။
ဆိုဒီယမ် perchlorate သည်လေထုမရှိသောကြောင့် UV light အောက်တွင်သတ္တုသံဖြင့်ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ DDI (Dimeryl Diisocyanate)